Gabalka Qoraxeey oo Ay Cadceed Caafimaad Qabtaa u Soo Baxday Saaka Aroortii – Rasaasa News
Sep 30, 2010 Eritrea, ethiopia, Gabalka Qoraxeey oo Ay Cadceed Caafimaad Qabtaa u Soo Baxday Saaka Aroortii, Ogaden, ONLF, peace
“Allow Dahariyo dalkeenii iyo dib loogu hayaamo dooxii” “Dabayshadeey Daleedii Cagaal yaan rag kale dagin dooxi Quruxsame”
Erayadaasi waxay ka mid ahaayeen baydadkii dhaanto ee xalay fiidkii laga maqlayey magaalada Qabridahare, halkaas oo ay afarta goone ee magaalada dhaanto ka tumayeen barbaarta magaalada Qabridahare.
Waxaa shalay ilaa iyo Doraar dayuurado khaas ah iyo baabuur lagu daad guraynayey dadweyne aad u badan oo ka tagay dibadaha iyo waliba qaar ka tagay magaalooyinka waaweyn ee Itobiya oo doonaya in ay ka qayb qaataan shirweynaha Qaran ee ka dhacaya magaalada Qabridahare ee gabalka Qoraxeey.
Gabalka Qoraxeey, gabalada la dariska ah iyo guud ahaanba degaanka Somalida ayaa si aad ah looga dareemayaa dhaqdhaqaaqayada u socda in ay ka qayb galaan shirweynaha Qaran.
Masuuliyiinta dawlada Fedrealka ah iyo kuwa heer Degaan ayaa si xoogan ugu soo qulqulaya magaalada, waxaana la filayaa in ay yimaadaan masuuliyiinta ugu saraysa ee dawlada Federalka ah.
Dhinaca kale xubnihii golaha dhexe ee ururka ONLF, kaadiriintii, taageerayaashii ururka iyo dadweyne ka tagay dibadaha oo ay daadahaynayaan ciidanka wadaniga xoraynta Ogadeeniya [cwxo] ayaa la filayaa in ay gaadhan tuulada Gari-go,an oo ka tirsan gabalka Qoraxeey.
Tuulada Gari-go,an ayaa waxaa horay u sii joogay ciidan xoog leh oo ka tirsan cwxo, kuwaas oo gaadhay tuulada todobaadkii hore bilowgiisii.
Maalinta Jamcaha ah ayaa waxaa ka furmidoona tuulada Gagri-go,an shiweynihii 3aad ee ururka ONLF, halkaas oo la filayo in lagu doorandoono gudoomiyaha Ururka islamarkaasna lagu doorandoono xubnaha golaha dhexe ee ururka ONLF.
Waxaa kale oo la filayaa in maadaama uu ururku nabad qaatay uu go,aamo ku saabsan mustaqbalka ururka ka soo saaridoono halkaasi iyo walba go,aamadii uu la tagi lahaa shirweynaha Qaran ee Qoraxeey.
Isku soo duub oo waxaad moodaa in uu waa cusub u bariyey dadweynaha Somalida Ogadeeniya halkaasna ay ku dhamaandoonto colaadii daashatay 18-ka sano. Waxaana la filayaa in dawlada, ururka ONLF iyo dadweynaha Somalida Ogadeeniya ay isku meel uga soo wada jeedsandoonaan wixii xumaan dalka ka wada.